E-Rickshaw waa koronto ku shaqeeya, baabuur saddex taayir leh oo ugu horrayn loo isticmaalo ujeeddooyin ganacsi si loogu qaado rakaabka iyo alaabta. E-rickshaw waxaa kaloo loo yaqaannaa tuk-tuk koronto iyo toto. Waxay isticmaashaa bateriga, matoorka jaranjarada, iyo korontada korontada si ay u kiciso gaariga.
Rickshaws waa hab caan ku ah gaadiidka rakaabka ganacsi, gaar ahaan Hindiya, Shiinaha, ASEAN, iyo dalal badan oo Afrika ah. Qiimaha hoose ee gaadiidka, qiimaha jiilaalka oo hooseeya, iyo dhaqdhaqaaqooda ku aaddan waddooyinka ciriiriga ah ee magaalooyinka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka rickshaws -ka, kuwaas oo dalabkooda ka kaxeynaya daafaha dunida. Intaa waxaa dheer, caadooyinka qiiqa ee adag, qiimayaasha shidaalka oo sii kordhaya, dhiirrigelinta e-rickshaws, iyo kororka e-rickshaws-ka ayaa u beddelaya doorbidista macaamilka xagga e-rickshaws. Intaa waxaa dheer, mamnuucidda la filayo in laga qaado baabuurta ku shaqeeya shidaalka waxay u badan tahay inay kiciso baahida loo qabo e-rickshaws.
Suuqa e-rickshaw ee adduunka waxaa ugu horrayn xannibaya kaabayaasha lacag-bixinta ee horumarsan ee dalal dhowr ah. Intaa waxaa dheer, xeerar la'aan ayaa sidoo kale xakameyneysa suuqa e-rickshaw ee adduunka.
Suuqa e-rickshaw ee adduunka ayaa loo kala qaybin karaa iyadoo lagu saleynayo nooca rickshaw, awoodda batteriga, qiimeynta awoodda, qaybaha, dalabka, iyo gobolka. Marka la eego nooca rickshaw, suuqa e-rickshaw ee adduunka waxaa loo qaybin karaa laba qaybood. Iyadoo la tixgelinayo baahida miisaanka yar ee wax-ku-oolnimada sare, heerka korsashada nooca e-rickshaws-ka ayaa ku soo kordhaya macaamiisha dhexdeeda.
Iyada oo ku saleysan awoodda batteriga, suuqa e-rickshaw ee adduunka ayaa loo kala qaybin karaa laba qaybood. Awoodda batteriga oo sarreysa, ayaa ka dheer inta kala duwan ee e-rickshaw; sidaa darteed, milkiilayaashu waxay doorbidaan e-rickshaws awoodda sare leh. Si kastaba ha noqotee, baytariyada awoodda sare leh, culeysku wuxuu u kordhaa saamiga. Marka la eego qiimeynta awoodda, suuqa e-rickshaw ee adduunka waxaa loo kala saari karaa saddex qaybood. Baahida loo qabo e-rickshaws oo leh awood matoor oo u dhexeysa 1000 iyo 1500 Watt ayaa sii kordheysa, taas oo ugu horreyn loo aaneynayo wax-ku-oolnimadooda qiimaha oo ay weheliso gaarsiin xad-dhaaf ah.
Marka la eego qaybaha, suuqa e-rickshaw ee adduunka waxaa loo kala saari karaa shan qaybood. Batarigu waa qayb muhiim ah oo qaali ah e-rickshaw. Batariyadu waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah waxayna u baahan yihiin beddel waqti cayiman ka dib, si loo hubiyo habsami u socodka baabuurka. Chassis waa qayb kale oo muhiim u ah e-rickshaw sidaa darteedna, waxay leedahay saamiga ugu weyn ee suuqa, xagga dakhliga. Iyada oo ku saleysan dalabka, suuqa e-rickshaw ee adduunka ayaa loo kala qaybin karaa gaadiidka rakaabka iyo gaadiidka alaabta. Qeybta gaadiidka rakaabka ayaa qeyb weyn ka qaadatay suuqa, marka la eego dakhliga, sanadka 2020, taas oo loo aaneynayo kororka isticmaalka rickshaws ee safarka rakaabka. Intaa waxaa dheer, ku darista e-rickshaws ee shirkadaha gaadiidka ee baahida loo qabo waxay u badan tahay inay kiciso qaybta gaadiidka rakaabka ee suuqa.
Marka la eego gobolka, suuqa e-rickshaw-ka adduunka waxaa loo qaybin karaa shan gobol oo caan ah. Aasiya Pacific waxay ku xisaabtantay saamiga ugu weyn ee suuqa, xagga dakhliga, sannadka 2020, taas oo ugu horreyn loo aaneynayo baahida sii kordheysa ee macaamiisha, dhiirrigelinta dowladda iyo siyaasadaha taageera, mamnuucidda rickshaws-ka ku shaqeeya shidaalka, iyo kordhinta qiimaha shidaalka. Intaa waxaa dheer, rickshaws waa hab gaadiid oo caan ah oo ku baahsan aagagga magaalooyinka dhowr waddan oo Aasiya ah, sida Shiinaha iyo Hindiya. Intaa waxaa sii dheer, joogitaanka soosaarayaasha e-rickshaw ee adduunka hogaamiya waa darawal kale oo caan ka ah suuqa e-rickshaw ee Aasiya Pacific.
Ciyaartoyda muhiimka ah ee ka shaqeeya suuqa e-rickshaw ee caalamiga ah waa Mahindra Electric Mobility Limited, MICROTEK, Nezonegroup, Arna Electric Auto Private Limited, GREEN VALLEY MOTORS, GEM E Rickshaw, SuperEco, Bajaj Auto Limited, Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory, Hitek Electric Auto Co ., YUVA E RICKSHAW, JS AUTO (P) LTD., Iyo Pace Agro Pvt. Ltd.
Warbixintu waxay bixisaa qiimeyn dhammaystiran ee suuqa. Waxay sidaas ku samaysaa aragti qotodheer oo tayo leh, xog taariikheed, iyo saadaalin la xaqiijin karo oo ku saabsan baaxadda suuqa. Saadaasha lagu soo bandhigay warbixinta ayaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo hababka cilmi -baarista iyo mala -awaalka. Markaad sidaas samayso, warbixinta cilmi -baaristu waxay u adeegtaa kayd kayd iyo falanqayn iyo xog dhinac kasta oo suuqa ah, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn: suuqyada gobolka, farsamada, noocyada, iyo codsiyada.
Daraasadu waa il xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan:
SeQeybaha suuqyada iyo qeybaha hoose
Trends Isbeddellada suuqyada iyo dhaqdhaqaaqa
UWaxaad dalbataa oo dalbataa
Size Cabbirka suuqa
Trends Isbeddellada/fursadaha/caqabadaha hadda jira
Landscape Muuqaalka tartanka
Break Horumarka farsamada
Chain Qiimaynta qiimaha iyo falanqaynta daneeyayaasha
Falanqaynta gobolku waxay daboolaysaa:
Or Waqooyiga Ameerika (Mareykanka iyo Kanada)
AtinLatin America (Mexico, Brazil, Peru, Chile, iyo kuwa kale)
Yurubta Galbeed (Germany, UK, France, Spain, Italy, dalalka Waqooyiga Yurub, Belgium, Netherlands, iyo Luxembourg)
As Bariga Yurub (Poland iyo Ruushka)
Aasiya Pacific (Shiinaha, Hindiya, Japan, ASEAN, Australia, iyo New Zealand)
Bariga Dhexe iyo Afrika (GCC, Koonfurta Afrika, iyo Waqooyiga Afrika)
Warbixinta waxaa lagu soo ururiyey cilmi -baaris aasaasi ah oo baaxad leh (iyada oo loo marayo wareysiyo, sahanno, iyo indho -indheyn falanqeeyayaal khibrad leh) iyo cilmi -baaris labaad (oo ay ka mid yihiin ilaha mushaharka leh ee sumcad leh, joornaalada ganacsiga, iyo keydadka hay'adaha warshadaha). Warbixintu waxay sidoo kale soo bandhigaysaa qiimeyn tayo iyo tiro leh oo dhammaystiran iyadoo la falanqeynayo xogta laga soo ururiyey falanqeeyayaasha warshadaha iyo ka -qaybgalayaasha suuqa dhammaan qodobbada muhiimka ah ee silsiladda qiimaha warshadaha.
Falanqayn gooni ah oo ku saabsan isbeddellada jira ee suuqa waalidka, tilmaamayaasha makro-iyo-yar-yar, iyo xeerarka iyo waajibaadka ayaa lagu soo daray dulucda daraasadda. Marka sidaas la sameeyo, warbixintu waxay mashruuc ka dhigaysaa soo jiidashada qayb kasta oo weyn inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Waxyaabaha ugu muhiimsan warbixinta:
Analysis Falanqayn guud oo dhammaystiran, oo ay ku jirto qiimaynta suuqa waalidka
Changes Isbeddel muhiim ah oo ku yimaadda dhaqdhaqaaqa suuqa
Qeybinta suuqyada ilaa heerka labaad ama saddexaad
Size Taariikhda, hadda, iyo qiyaasta suuqa ee xagga qiimaha iyo mugga labadaba
EpWarbixinta iyo qiimaynta horumarka warshadaha ee ugu dambeeyay
Saamiyada suuqyada iyo xeeladaha ciyaartoy muhiim ah
Dhaqaalaha qeybaha niche iyo suuqyada gobolka
AssessmentQiimeyn ujeedo leh oo ku wajahan dariiqa suuqa
Talooyin ku wajahan shirkadaha xoojinta raadkooda suuqa
Xusuusin: In kasta oo taxaddar la sameeyay si loo ilaaliyo heerarka ugu sarreeya ee saxnaanta warbixinnada TMR, isbeddelada suuqyada/iibiyaha-gaarka ah ee u dambeeyay ayaa laga yaabaa inay qaataan waqti ay ku muujiyaan falanqaynta.
Daraasaddan oo ay samaysay TMR waa qaab-dhismeed dhan walba ka kooban oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa suuqa. Waxay inta badan ka kooban tahay qiimeyn muhiim ah oo ku saabsan socdaallada macaamiisha ama macaamiisha, waddooyinka hadda jira iyo kuwa soo baxaya, iyo qaab -dhismeed istiraatiiji ah si CXO -yadu u qaataan go'aanno wax ku ool ah.
Aasaaskayaga ugu muhiimsan waa 4-Quadrant Framework EIRS oo bixisa muuqaal faahfaahsan oo ka kooban afar qodob:
Ma Khariidadaha Khibrada Macaamiisha
NsFalanqaynta iyo Qalabyada ku salaysan cilmi-baadhista xogta lagu wado
Results Natiijooyin Wax -ku -ool ah si loo buuxiyo dhammaan mudnaanta ganacsiga
Fra Qaab -dhismeedka Istaraatiijiga ah si kor loogu qaado safarka koritaanka
Daraasaddu waxay ku dadaaleysaa inay qiimeyso rajooyinka kobaca hadda iyo kuwa mustaqbalka, waddooyinka aan la adeegsan, qodobbada qaabeynaya awooddooda dakhli, iyo baahida iyo qaababka isticmaalka suuqa adduunka iyadoo loo jabiyo qiimeynta gobolka.
Qeybaha soo socda ee gobolka ayaa si guud loo daboolay:
America Waqooyiga Ameerika
Bariga Dhexe iyo Afrika
Qaab-dhismeedka afar-geesoodka ah ee EIRS ee warbixintu wuxuu soo koobayaa baaxadda ballaaran ee cilmi-baarista iyo la-talinta xogta ee ay waddo CXOs si looga caawiyo inay go'aanno wanaagsan u gaaraan ganacsigooda oo ay sii ahaadaan hoggaamiyeyaal.
Hoos waxaa ku yaal sawir afar geesood ah.
1. Khariidada Khibrada Macmiilka
Daraasadu waxay bixisaa qiimeyn qoto dheer oo ku saabsan safarada macaamiisha kala duwan ee ku habboon suuqa iyo qeybaheeda. Waxay bixisaa aragtiyo macmiil oo kala duwan oo ku saabsan badeecadaha iyo adeegsiga adeegga. Falanqayntu waxay si qoto dheer u eegaysaa meelaha xanuunkooda iyo cabsida ay ka qabaan dhibcaha kala duwan ee macaamilka. Wadatashiga iyo xalalka sirdoonka ganacsigu waxay caawin doonaan daneeyayaasha danaynaya, oo ay ku jiraan CXOs, inay qeexaan khariidadaha waayo -aragnimada macmiilka ee ku habboon baahidooda. Tani waxay ka caawin doontaa inay higsadaan inay kor u qaadaan ka -qaybgalka macaamiisha ee summadooda.
2. Fahanka iyo Qalabka
Aragtiyaha kala duwan ee daraasaddu waxay ku salaysan yihiin wareegyo faahfaahsan oo ah cilmi -baaris aasaasi ah iyo mid sare oo ay falanqeeyayaashu ku hawlan yihiin inta cilmi -baadhistu socoto. Falanqeeyayaasha iyo la-taliyayaasha khabiirka ah ee TMR waxay qaataan aaladaha wax-soo-saarka macaamiisha oo tiro badan iyo hababka saadaasha suuqa si ay u gaaraan natiijooyin, taas oo ka dhigaysa mid lagu kalsoonaan karo. Daraasaddu ma aha oo kaliya inay bixiso qiyaaso iyo saadaalinno, laakiin waxay kaloo leedahay qiimeyn aan kala go 'lahayn oo tirooyinkan ku saabsan dhaqdhaqaaqa suuqa. Aragtiyahaan waxay isku daraan qaab-dhismeed cilmi-baaris ku saleysan oo la-tashiyo tayo leh u leh milkiilayaasha meheradaha, CXOs, dejiyeyaasha siyaasadda, iyo maalgashadayaasha. Fikradaha ayaa sidoo kale ka caawin doona macaamiishooda inay ka gudbaan cabsidooda.
3. Natiijooyin Wax -ku -ool ah
Natiijooyinka lagu soo bandhigay daraasaddan TMR waa hage lama huraan ah si loo buuxiyo dhammaan mudnaanaha ganacsiga, oo ay ku jiraan kuwa hawlgalka muhiimka ah. Natiijooyinka markii la hirgaliyay waxay muujiyeen faa'iidooyin la taaban karo daneeyayaasha ganacsiga iyo hay'adaha warshadaha si kor loogu qaado waxqabadkooda. Natiijooyinka waxaa loo qaabeeyey si ay ugu habboonaadaan qaab -dhismeedka istiraatiijiyadeed ee shaqsiga. Daraasaddu waxay sidoo kale tusinaysaa qaar ka mid ah daraasad -kiiskii ugu dambeeyay ee ku saabsan xallinta dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmeen shirkadihii ay la kulmeen socdaalkooda xoojinta.
4. Qaababka Istiraatiijiga ah
Daraasaddu waxay qalabeysaa meheradaha iyo cid kasta oo danaynaysa suuqa si ay u dejiyaan qaab -dhismeedyo ballaadhan oo istiraatiiji ah. Tani waxay noqotay mid ka sii muhiimsan sidii hore, marka la eego hubin la'aanta hadda jirta ee ka dhalatay COVID-19. Daraasadu waxay ku tashaneysaa wadatashiyada si looga gudbo carqaladihii hore ee kala duwanaa waxayna saadaalineysaa kuwa cusub si kor loogu qaado u diyaargarowga. Qaab -dhismeedyadu waxay ka caawiyaan ganacsiyada inay qorsheeyaan is -waafajin istiraatiiji ah si ay uga soo kabtaan isbeddellada carqaladaynta leh. Dheeraad ah, falanqeeyayaasha TMR waxay kaa caawinayaan inaad jebiso xaaladda murugsan oo aad adkeysi u yeelato waqtiyo aan la hubin.
Warbixintu waxay iftiiminaysaa dhinacyo kala duwan waxayna ka jawaabtaa su'aalaha khuseeya suuqa. Qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waa:
1. Maxay noqon karaan xulashooyinka maalgashi ee ugu wanaagsan ee ku -biiridda khadadka alaabta iyo adeegga cusub?
2. Maxay yihiin soo jeedinnada qiimaha ee ay tahay in ganacsatadu higsadaan inta ay samaynayaan maalgelin cilmi -baaris iyo horumarineed oo cusub?
3. Xeerarkee ayaa aad u caawin doona daneeyayaasha si kor loogu qaado shabakadda silsiladda sahayda?
4. Gobolladee ayaa laga yaabaa inay arkaan baahida sii bislaatay qaybaha qaarkood mustaqbalka dhow?
5. Maxay yihiin qaar ka mid ah xeeladaha wanaajinta qiimaha ugu fiican ee leh iibiyeyaal oo qaar ka mid ah ciyaartoydii xididdada lihi ay guul ka gaareen?
6. Waa kuwee aragtiyaha muhiimka ah ee ay C-suite ka faa'iideysanayso si ay ganacsiyada ugu wareejiso dariiqa kobaca cusub?
7. Waa kuwee xeerarka dawladda ee caqabad ku noqon kara xaaladda suuqyada gobollada ee muhiimka ah?
8. Sidee bay duruufaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee soo baxaya saamayn ugu yeelan doonaan fursadaha meelaha koritaanka muhiimka ah?
9. Maxay yihiin qaar ka mid ah fursadaha qiimo-dhaca ee qaybaha kala duwan?
10. Maxay noqon doontaa caqabadda hortaagan soo gelitaanka ciyaartooyda cusub ee suuqa?
Iyada oo waayo -aragnimo adag u leh abuurista warbixinnada suuqa ee gaarka ah, Cilmi -baarista Suuqa Hufnaanta ayaa u soo baxday inay tahay mid ka mid ah shirkadaha cilmi -baarista suuqa ee lagu kalsoon yahay oo ka mid ah tiro badan oo daneeyayaal ah iyo CXOs. Warbixin kasta oo ka soo baxda Cilmi -baarista Suuqa Daah -furnaanta waxay soo martaa hawlo cilmi -baaris oo adag dhinac kasta. Baarayaasha TMR waxay si dhow isha ugu hayaan suuqa waxayna soo saaraan dhibco kobcin leh oo faa'iido leh. Qodobadani waxay ka caawiyaan daneeyayaasha inay istaraatiijiyad u sameeyaan qorshayaashooda ganacsi si waafaqsan.
Baarayaasha TMR waxay sameeyaan cilmi baaris tayo iyo tiroba leh. Cilmi -baaristaani waxay ku lug leedahay qaadashada wax -soo -saarka khubarada suuqa, fiiro gaar ah u leh horumarradii ugu dambeeyay, iyo kuwa kale. Habkan cilmi baaristu wuxuu ka dhigayaa TMR inay ka soocan tahay shirkadaha kale ee cilmi baarista suuqa.
Waa kan sida Cilmi -baarista Suuqa Hufnaanta ay u caawiso daneeyayaasha iyo CXOs warbixinnada:
Ku -biirinta iyo Qiimaynta Iskaashiga Istiraatiijiyadeed: Cilmi -baadhayaasha TMR waxay falanqeeyaan dhaqdhaqaaqyada istiraatiijiyadeed ee ugu dambeeyay sida isku -biirinta, iibsiga, iskaashiga, iskaashiga, iyo iskaashatooyinka wadajirka ah. Macluumaadka oo dhan waa la soo ururiyay waxaana lagu daray warbixinta.
Qiyaasaha Cabbirka Suuqa Wanaagsan: Warbixintu waxay lafo -guraysaa tirakoobka, kartida koritaanka, iyo kartida suuqa illaa xilliga saadaasha. Arrintani waxay horseedaa qiyaasidda cabbirka suuqa iyo sidoo kale waxay bixisaa dulmar ku saabsan sida suuqa u soo ceshan doono kobaca muddada qiimeynta.
Cilmi -baarista Maalgashiga: Warbixintu waxay diiradda saareysaa fursadaha maalgashi ee socda iyo kuwa soo socda ee suuq gaar ah. Horumarradan waxay daneeyayaasha ka dhigaan inay ogaadaan duruufaha maalgashi ee hadda ka jira suuqa oo dhan.
Baaskiilka Buluuga ah ee Fudud, 22.5 Daboolida Gawaarida, E Biyo -mareenka, Best Battery Battery Charger Battery, Cidhiidhiga Baaskiilka, Puck Side Stand,